Maxamed Berrado: "suugaanta, midnimada Carabta ayaa sii waday inuu ku noolaado" - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
ACCUEIL » International Maxamed Berrado: "suugaanta, midnimada Carabtu waxay sii waddaa inay noolaato" - JeuneAfrique.com
Maxamed Berrado: "suugaanta, midnimada Carabtu waxay sii waddaa inay noolaato" - JeuneAfrique.com
Nooc weyn, oo ah rukun qaro weyn oo American Paul Auster ku xardhay gacanta hoosteeda, Maxamed Berradohelaa Dhallinyarada Afrika ee xafiisyada uu daabacaadda Faransiiska, Actes Sud, ee Paris. Maanta, calaamad u ah suugaanta farsamada casriga ah, oo ku dhashay 1938, ayaa u dhaxaysa koonfurta France iyo Rabat, magaaladii arkay inay koraan.
Ninka Diblomaasiyiinta Falastiiniyiinta Leila Shahid waa nin dhoola cadeynaya, dhaqankiisa, iyo maskax ahaan. Wuxuu ka hadlaa wax yar oo ku saabsan ballanqaadkiisa, bidix. Mawduuc dhif ah oo uu ku adkeynayo? In dhammaan buugaagtiisuna ay si fiican u daabacan yihiin, wax kasta oo luuqada ah, qiimo jaban, hoosta Moroccan.
>>> READ - Morocco - Maxamed Berrada: "Ilaalaheyga, kacdoonku marwalba wuu haystaa wuxuu ahaa aaladda "
Mid ka mid ah ra'yigiisa, Ciyaaraha Dhibaatada, ayaa lagu qoray barnaamijka waxbarashada dugsiga sare ee Morocco. Berrada waxay noqotaa "mid caadi ah". Haddii uu suugaanku sarreeyo, waa sababtoo ah ma uusan ka fikirin waxqabad gaar ah. Casriyaynta casriga ah, sidoo kale wuxuu ku jiraa qaabkiisa: buugiisa, saameyntiisa, dhaqanka, siyaasadda, taariikhda ... wax walboo xiriir la leh.
Jeune Afrique: Qoraaga ugu dambeeyay ee lagu daabacay Faransiiska, Ka fog diinta, waxaa inta badan kudhawaadaa su'aalaha xusuusta. Waa maxay sababta doorashadan?
Maxamed Berrado: Xusuusta iyo taariikhda ayaa weli ah dhibco badan inta uu furriinka u dhaxeeyo hal dhinac dhaqdhaqaaqa qaranka, iyo kan kale, Palace, ka dib markii madax-bannaanida. Tartanka u dhexeeya labada, oo wadaagay ka hor 1956 isla khayaali ah "qaran", si loo isticmaalo erayada Linguist iyo Marxist taariikhda Faransiis Maxime Rodinson, waa xaqiiqda muhiimka ah ee taariikhda waana la ogaadaa qoraalladiisa, had iyo jeer waxay ku xirantahay naxaas.
Dab-bakhti weyn oo ku yaal Notre-Dame Cathedral